UThixo Ngoyena Mhlobo Ulungileyo Unokuze Ube Naye
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Intetho Yezandla YaseCuba Intetho Yezandla yase-Ecuador Intetho Yezandla yaseCosta Rica Intetho Yezandla yaseDatshi Intetho Yezandla yaseFilipi Intetho Yezandla yaseFinland Intetho Yezandla yaseGuatemala Intetho Yezandla yaseHungary Intetho Yezandla yaseIndonesia Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Intetho Yezandla yaseNew Zealand Intetho Yezandla yaseOstriya Intetho Yezandla yasePanama Intetho Yezandla yaseParaguay Intetho Yezandla yasePersi Intetho Yezandla yaseSpain Isi-Indonesia IsiAbkhaz IsiAlbania IsiArabhu IsiArmenia IsiBaoule IsiBatak (SaseKaro) IsiBatak (SaseSimalungun) IsiBatak (SaseToba) IsiBhulu IsiBicol IsiCebuano IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKorea IsiKrio IsiKwanyama IsiLhukonzo IsiLithuania IsiMalagasy IsiMapudungun IsiMbunda IsiMizo IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNgesi IsiNias IsiNiuea IsiNorway IsiNzema IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiRomany (SaseSouthern Greece) IsiSerbia IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwedish IsiTahiti IsiThai IsiTongan IsiTotonac IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTzotzil IsiUrhobo IsiUzbek IsiUzbek (NgesiRoman) IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Ukuba ngumhlobo kaThixo yeyona nto ilungileyo unokuze uyifumane. UThixo uya kukufundisa indlela yokuzuza uvuyo nokunqabiseka; uya kukukhulula kwiinkolelo eziphosakeleyo ezininzi nasekwenzeni izinto ezenzakalisayo. Uya kuyiphulaphula imithandazo yakho. Uya kukunceda unandiphe uxolo lwangaphakathi yaye ube nentembelo. (INdumiso 71:5; 73:28) UThixo uya kukuxhasa kumaxesha anzima. (INdumiso 18:18) Yaye uThixo ukunika isipho sakhe esibubomi obungunaphakade.​—Roma 6:23.
Njengoko usondela kuThixo, uya kusondelelana nabahlobo bakaThixo. Nabo baya kuba ngabahlobo bakho. Enyanisweni, baya kuba njengabazalwana noodade kuwe. Baya kukuvuyela ukukufundisa ngoThixo yaye baya kukunceda baze bakukhuthaze.
Asilingani noThixo. Njengoko ufuna ubuhlobo noThixo, kukho inkalo ebalulekileyo ofanele uyiqonde. Ubuhlobo noThixo asibobuhlobo obuphakathi kwabantu abalinganayo. Mdala gqitha, ulumke ngeyona ndlela yaye unamandla ngakumbi kunokuba sinjalo. Ungoyena Mlawuli wethu ofanelekileyo. Ngoko ke ukuba sifuna ukuba ngabahlobo bakhe, sifanele simphulaphule size senze oko asixelela kona. Oku kuya kusoloko kuluncedo kuthi.​—Isaya 48:18.